Amalitere na 1998 na ndị ngosi 384, oghere ngosi nke mita 45,000 na ndị bịara ihe karịrị 20,000 ndị na-azụ ahịa, CIFF, China International Furniture Fair (Guangzhou / Shanghai) enweela ihe ịga nke ọma maka nnọkọ 45 wee mepụta ahịa kachasị amasị ụwa. platfo ...
Mmetụta ịkwọ ụgbọala nke nkwari akụ na njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ ndị na-ere n'èzí
Site na mmụba na-aga n'ihu nke ụkpụrụ ibi ndụ, ọtụtụ mmadụ na-akwadebe maka ụzọ njem dị iche iche nke ọma mgbe ha nwere oge na ike ego. Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya kachasị ewu ewu bụ ndị enwere ike ịga na agbanyeghị oge. O doro anya na ọganihu ahụ na-eduga na mmepe ...
Banyere Ngwá ụlọ na ihe ndị dị n'èzí
Kedu ihe kpatara anyị ji azụta arịa ụlọ n'èzí mgbe ị na-ahazi oghere n'èzí? Nke ahụ bụ n'ihi na mgbakwunye na imewe nke arịa ụlọ n'èzí, ọ ga-enwerịrị ihe achọrọ maka ndụ n'èzí, na gburugburu ebe obibi dị njọ karịa ime ụlọ, yabụ, ihe eji eji ụlọ dị n'èzí kwesịrị Pụrụ Iche mmiri -...